Himalaya Dainik » बेलायत पुग्ने पहिलो नेपाली को थिए ?
बेलायत पुग्ने पहिलो नेपाली को थिए ?
जंगबहादुरको बेलायत भ्रमणबारे धेरै लेखिएका छन् । तर, त्यसै भ्रमणमा छुटेको एउटा ठूलो तथ्य हो, रहस्यमय मोतीलालबारे । सुरुमा भनिएको थियो, उनी भारतीय हुन् । नेपालका धेरै ऐतिहासिक पात्रलाई विदेशमा भारतीय भनेर लेखिएका छन् । धेरैले मोतीलालबारे यस्तै सम्झे र बुझे । त्यो भ्रम थियो । ‘अहिले प्राप्त तथ्यले हामी के निश्चित ठोकुवा गर्न सक्छौं भने मोतीलाल नेपाली नै हुन् । यसमा अब कुनै विवाद रहेन,’ मोतीलालबारे अनुसन्धान गरिरहेका मानवशास्त्री कृष्णप्रसाद अधिकारी भन्छन् । उनी अक्सफोर्ड युनिभसिर्टीका रिचर्स फेलो हुन् ।
अब प्रश्न उठ्ने गर्छ, के ती मोतीलाल आफ्नो घर फर्कन सफल भए त ? उनको लेखमै पनि नामअगाडि ‘लेट क्रसिङ स्विपर’ जोडिएको छ । त्यसको अर्थ, जंगबहादुरको भ्रमणलगत्तै उनको मृत्यु भएको थियो अथवा उनले त्यो पेसा छाडे, त्यसैले उनी भूतपूर्व कुचीकार भए त ? यसको दुवै अर्थ हुन सक्छ । अधिकारी उनीबारे थप अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
अधिकारी सम्मिलित सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूकेले मोतीलालबारे वर्षमा एकपल्ट उनको सम्झनामा कार्यक्रम गर्ने सोच पनि बनाएको छ । नेपाल र बेलायतबीच सम्बन्ध स्थापनाको दुई वर्ष पुग्न लागेको समयमा मोतीलालबारे जानकारी आउनु अधिकारी ठूलै उपलब्धि मान्छन् । उनी थप्छन्, ‘मोतीलालको भक्तपुरस्थित परिवारका नयाँ पुस्ता अझै छन् होला, तिनलाई मोतीलालबारे केही थाहा छ त ?’